Real Football 1.6.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.6.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား Real Football
Real Football ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အားလုံးတစ်ဦးကို 20MB အထုပ်ထဲမှာ, အစေးအပေါ်နဲ့ off နှစ်ဦးစလုံးရီးရဲလ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတွေ့ကြုံခံစား!
အခမဲ့ဘောလုံးခြင်း simulation ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေ features အသစ်၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုနှင့်အတူကဒီမှာပါ! သင့်ရဲ့အိပ်မက်အသင်း Build နှင့်ကမ္ဘာ၏ချန်ပီယံဖြစ်လာမှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ! အဖွဲ့အဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်, ကြယ်ပွင့်ကစားသမားစုဆောင်း, သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်, ကမ္ဘာ့ Arena ၌ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်နှင့်များစွာသောပိုပြီး!
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်ယောင်: 3D အားကစားကွင်း, ပွတ်မှောင်မိုက်အရိပ်, အသေးစိတျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပရိသတ်အားလုံးတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လေထုများကိုအတူတူလာ!
တိုးတက်လာသောပြိုင်ဘက်များနှင့် positioning ကို: ပိုမိုထိရောက်သောကစားသမားတစ်ဦးပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျနှင့်စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံအတွက်လုပ်!
အဆောက်အအုံများ, အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏တွင် TEAM ခဲ!
အထီနှင့်ပွဲစဉ်အားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုပစ္စည်းများလေးလည်းအားဖြင့်သင့်ကစားသမားတွေ '' စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်!
အားကစားကွင်း, ဆေးရုံတွေ, Physiotherapy စင်တာများနှင့်လူငယ်စခန်းအပါအဝင်သင့်ရဲ့အဖွဲ့အဆောက်အဦကို upgrade!
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း PvP ကမ္ဘာ့ဖလား Arena mode မှာအခြားကစားသမားကိုစိန်ခေါ်မယ်နှင့်ဦးဆောင်တက်!
ရီးရဲလ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, သင်သည်မိဿဟာသို့မဟုတ်ခွက်ကိုချန်ပီယံအနိုင်ရကမ္ဘာချန်ပီယံနှင့်အတူဆော့ကစား, တစ်စိတ်ကူးယဉ်အဖွဲ့မန်နေဂျာဖြစ်နှင့်ထို့ထက် ပို. နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအခမဲ့ခြင်း simulation အားကစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တဦးတည်းဘောလုံးအထုပ်ထဲမှာသင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အခမဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း simulation နှင့်ပြည့်စုံသောမန်နေဂျာဂိမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျ, ဘောလုံး Simulator ကြိုက်တယ်စိတ်ကူးယဉ်မန်နေဂျာဂိမ်းသို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာအားကစားတစ်ပန်ကာင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီအခမဲ့ဂိမ်းသင်တို့အဘို့။
http://www.gameloft.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတဦး site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်ခေါင်းစဉ်အကြောင်းပိုမိုအချက်အလက်ရရှိရန် http://glft.co/GameloftonTwitter မှာသို့မဟုတ် http://facebook.com/Gameloft မှာ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတူ Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။
အရာအားလုံး Gameloft အပေါ်အတွင်းရေးသတင်းများကိုဘို့ http://glft.co/Gameloft_Official_Blog မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ရှာဖွေပါ။
ဒီ app ကိုသင် app ကိုအတွင်းကို virtual ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
end-User License Agreement ကို: http://www.gameloft.com/eula/?lang=en
Real Football အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Real Football အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Real Football အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Real Football အား အခ်က္ျပပါ
Real Football ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Real Football အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.6.0
Release date: 2019-07-28 18:24:48
Real Football APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ